Qaxoonti Lagu Addoonsaday Liibiya Oo Rwunda Lagu Qaabbilay Iyo Xaaladda Soomaaliyad Laba Bilood Jir Ah Oo Ka Mid Ah | Gabiley News Online
Qaxoonti Lagu Addoonsaday Liibiya Oo Rwunda Lagu Qaabbilay Iyo Xaaladda Soomaaliyad Laba Bilood Jir Ah Oo Ka Mid Ah
66 Qof oo Muhaajiriin ah, ayaa gaadhay Dalka Ruwanda, kuwaas oo qaab Addoonsi ah loogu haystay Xabsiyo ku yaalla waddanka Liibiya. Waxaa dadkaa ku jira gabadh yar oo Soomaaliyeed oo muddo laba bilood ah jirtay.
Arrintani ayaa ka dambeesay markii Ha’yadda Qaramada Midoobey u qaabilsan qaxootiga ee UNCHR iyo dowladda Rwanda ay ku heshiiyeen in muhaajirintaas kooxdii ugu horreysay laga soo daabulo Libya.
Rwanda waxay ku aqbashay inay qaabbisho in ka badan 500 qof oo muhaajiriin ah oo ku xayirnaa dhibaatooyinka ka taagan dalka Libya kuwaas oo isku dayay inay gaaraan Yurub.
Muhaajiriinta gaadhay Rwanda
“Waxaan si gaar ahaaneed ugu mahadcelineynaa shacabka Rwanda ee soo dhaweeyay muhaajiriinta” ayaa lagu yiri qoraal barta Twitter-ka ay soo gelisay ha’yadda UNCHR. Qaramada Midoobey waxay sheegtay in kooxdan ugu horreysay ee muhaajiriinta ah ee soo gaaray Rwanda ay kamid yihiin carruur iyo hooyooyin, waxay qaar kamid ah dadkaas kasoo jeedaan geeska Afrika.
Waxaana kamid ahaa dadkaas hooyo soomaaliyeed iyo canugeeda oo 2 bilood dhalan , sida ay sheegtay UNHCR. “Haddiya, waa gabar yar oo Soomaali ah oo 2 bilood dhalan, waxay ku dhalatay xeryaha muhaajiriinta ee Libya, berito waxay kasoo toosi doontaa goob ammaan ah oo ku taal Rwanda iyada iyo waaliddiinteeda” ayay tiri UNHCR.
Muhaajiriinta waxaa la geeyay xarunta Gashura oo dhacdo koonfurta magaalada caasimadda ah ee Kigali. Qaramada Midoobey waxay sheegtay in ka badan 4,500 qof oo muhaajiriin ah oo ku sugan xeryo ku yaal Libya ay u baahan yihiin in si deg deg ah halkaas looga soo daabulo maadama ay noloshooda halis ku jirto.
Sidoo kale, Warkaas oo Muuqaal ah, waxaannu idiinku soo gudbinaynaa Muuqaalkan hoose ee ka bogasho wacan oo wanaagsan